बच्चा को लागि Articulation अभ्यास: फाइल, अभ्यास र समीक्षा
शैशवकालदेखि बच्चाहरु देखि जिब्रो र ओठ विभिन्न आन्दोलनहरु धेरै गरिरहेको। यी वाणी को विकास तिर पहिलो कदम हो।
तथापि, अक्सर त्यहाँ पूर्व-विद्यालय उमेर भएका अक्षरहरू धेरै उच्चारण छैन छोराछोरी छन्। Articulation अभ्यास बच्चाहरु को लागि आवश्यक छ। यो आलेख व्यायाम, बोली चिकित्सा, र मुख्य सिफारिसहरू परिसर व्यवस्थित गर्न कसरी हेर्न हुनेछ भाषण चिकित्सा अभ्यास प्रिस्कूल लागि।
को articulation अभ्यास के छ
एक बच्चाको लागि यो अक्षर, ध्वनि र शब्द बङ्ग्याउन बिना कसरी बोल्न सिक्न उमेर पाँच वर्ष महत्त्वपूर्ण छ। दुर्भाग्यवश, तथ्याङ्क अन्यथा संकेत गर्छ। धेरै पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु5वर्ष एक वा बढी अक्षरहरू (एक्स, W, पी, एल) mispronounce। त्यो किन आवश्यकता भाषण चिकित्सा कक्षाहरू छ।
यस पछि बच्चा संलग्न सुरु, को कठिन यसलाई सही उच्चारण सिक्न छ। समयमै पाठ आफ्नो बच्चा केही कठिनाइ जोगिन मदत गर्नेछ, र उहाँले सही, सफाइको र ठीक बोल्न थियो। आमाबाबुले बच्चाको उच्चारण ध्यान भने, भाषण चिकित्सक जोगिन मदत गर्न सक्छ। यी सबै गतिविधिहरु पछि समय, प्रयास र पैसा धेरै लिन।
एक बच्चा वर्तमान बिगडा बोली हो भने, articulation अभ्यास उहाँले सजिलै जिब्रो रूपमा, एक भाषण चिकित्सक संलग्न गर्न सक्षम, ओठ बढी उन्नत कक्षाहरू लागि तयार हुनेछ जब।
Articulation अभ्यास वयस्क र बच्चाहरु दुवै एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा लेखन योगदान जो सही उच्चारण जान्न मदत। आखिर, पढ्न र बच्चा सक्षम, छैन भने स्पष्ट सबै अक्षर वा ध्वनि उच्चारण गर्न सक्ने छैनन् लेख्न पनि।
articulation अभ्यास को संगठन
आमाबाबुले वा हेरविचारकर्ताओं एक चंचल तरिकामा छोराछोरीलाई सिकाउन आवश्यक छ। त्यसपछि बच्चा लागि articulation अभ्यास रोचक हुनेछ। यो गर्न, एक वयस्क स्पष्ट बताउन र अभ्यास देखाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईं बारम्बार आफ्नो बच्चा माग्नुपर्छ। अनुचित कार्य अभ्यास वयस्क छोराछोरी ठीक गर्नुपर्छ भने।
यो बच्चा articulation अभ्यास सही गरे कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सटिक आन्दोलनहरु र गति सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तपाईं देख्नुहुन्छ भने एक बच्चाको कुरा काम गर्दैन, सही भाषा पठाउन चम्मच वा टूथब्रश ह्यान्डल उहाँलाई मदत।
कहिलेकाहीं छोराछोरीलाई कसरी भाषा र माथिल्लो ओठ प्रयोग गरेर एक व्यायाम गर्न बुझ्दैनन्। यस्तो अवस्थामा लागि, तपाईं मीठो कुरा हुनुपर्छ। अब तरल चकलेट, गाढा दूध वा जाम आफ्नो माथिल्लो ओठ फैलियो। आफ्नो बच्चा मीठो चाट्नेछन् गरौं। त्यसपछि उहाँले भाषा को संवैधानिक स्थिति बुझ्न हुनेछ।
पहिलो आन्दोलन तनावपूर्ण हुनेछ भने सजग छैन। तपाईं 15 मिनेट, प्रवर्तन articulation अंगहरु को विश्राम लागि हरेक दिन पाठ दिन भने।
बोली चिकित्सा अभ्यास लागि सिफारिसहरू
Articulation अभ्यास हरेक दिन बाहिर गर्नुपर्छ। यो पाँच मिनेट भन्दा कम 3-4 पल्ट मनमोहक छ। 1 गतिविधि बच्चा3अभ्यास अधिकतम प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ। बच्चाहरु भ्रमित प्राप्त गर्न सुरु रूपमा, अधिक प्रस्ताव छैन। प्रत्येक व्यायाम बारेमा 5-6 पटक बाहिर छ।
जब articulation अभ्यास छनौट, बच्चा भ्रममा छैन गर्न अनुक्रम सधैं पालना गर्नुहोस्। बिस्तारै थप जटिल तिर शीर्षक, प्रकाश अभ्यास सुरु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Articulating व्यायाम प्राथमिकताको को दर्पण अघि बाहिर। बच्चा आफ्नो जिब्रो र ओठ को सही आन्दोलन हेर्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो गल्ती देख्न र राम्रो आफूलाई काम गर्न सक्षम हुनेछ।
कार्य गर्दा अभ्यास दिनहुँ नयाँ सामाग्री प्रयोग गर्नुहोस्। तथापि, नियम पारित छैन। व्यायाम2दोहोरिन र एउटा नयाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि बच्चा भ्रमित हुने छैन। भौतिक मजबूत निरन्तर खेल भन्दा लाग्छ। त्यसपछि मात्र बच्चाको लागि articulation अभ्यास मजा हुन। त्यसपछि आफ्नो बच्चा सही उच्चारण सिकाउन गाह्रो हुने छैन।
औंला व्यायाम - बोलीको विकास तिर पहिलो चरण
एक बच्चा संग जन्म संलग्न सुरु गर्नुपर्छ। यसले तिनीहरूलाई सही अक्षर वा शब्द सिकाउन आवश्यक छ मतलब छैन। उपयुक्त सुरु गर्न औंला व्यायाम, धन्यवाद यसलाई विकास गरिएको छ जो। तर, सबै बच्चाहरु उनको प्रेम। तसर्थ, औंला व्यायाम invisibly बच्चा गर्न गर्नुपर्छ। विशेष गरी यदि यो धेरै सानो छ।
जब तौलिया बच्चा हात, प्रत्येक औंला प्याड मालिश। अक्सर Palms र औंलाहरु को मद्दतले सकेसम्म कविता र Jokes बताउनुहोस्। तपाईं बच्चा मात्र चासोको विषय होइन, तर पनि राम्ररी कुरा गर्न, उहाँलाई चाँडै सुरु गर्न मदत।
प्रत्येक बच्चाको लागि उपयोगी उनको औंलाहरु रंग। यो रचनात्मक विशेष पेंट्स बेचिन्छ लागि बच्चा को स्वास्थ्य को लागि सुरक्षित छ भनेर।
पुरानो छोराछोरी, उपयुक्त gouache लागि। औंलाहरु चित्रकला मजा। उहाँलाई धन्यवाद, बच्चा सही र स्पष्ट ध्वनि वा अक्षरहरू उच्चारण गर्न थाल्छ।
मुख्य जटिल articulation बच्चाहरु4वर्ष को लागि अभ्यास
जब तपाईं एक बच्चाको उच्चारण उल्लङ्घनको पाएका छन् articulation अभ्यास नियमित संलग्न। यो बच्चाहरु बोल्न र दोष बिना कसरी सिक्न मदत गर्नेछ।
उमेर4वर्ष मुनिका बच्चाहरु अक्षरहरू धेरै दलदल छैन। धेरै छोराछोरी अझै पनि गरिब उच्चारण, समय संग सही छ जो। केही बच्चाहरु चाँडै सही शब्द सिक्न गर्न अभ्यास गर्न आवश्यक छ।
Articulating बच्चाहरु को लागि व्यायाम मजा र रोमाञ्चक को4वर्ष। तसर्थ, बच्चाहरु के र ऐनामा मुख बिगाराइ गर्न चाहनुहुन्छ। यी सत्र देखि छ मुड उठ्नेछ।
जब बच्चा कमजोर ओठ, यी अभ्यास गर्न:
लोखर्के। गाला मुख मा हावा पकड फुल्नु,4सेकेन्ड पछि जारी। यो5पटक गर्छन्।
भोक लोखर्के। सकेसम्म धेरै गाल आकर्षित।
चित्रकला। यो एक पेन्सिल ओठ पकड आवश्यक छ। यो व्यायाम थप अध्ययन लागि मांसपेशिहरु र रेल बलियो बनाउँछ।
प्रशिक्षण सत्र पछि, थप जटिल अभ्यास जानुहोस्। त्यहाँ दुई प्रकारका छन् स्थिर: अभ्यास को र गतिशील। पहिलो विकल्प मांसपेशिहरु बलियो, र भाषण को विकास को लागि दोस्रो तयार छ।
Birdie। मुख कडा खोलियो, तर आन्दोलन बिना जिब्रो, मुख मा सजिलै छ।
Lopatka। मुख व्यापक खुला र जिब्रो तल्लो ओठ मा स्थित छ।
रिस किट्टी। विस्तृत आफ्नो मुख खोल्नुहोस्, जिब्रोको टिप स्लाइड प्राप्त गर्न ताकि तल्लो दाँत विरुद्ध खण्डमा।
च्याउ। मुख खुला र जिब्रो स्पर्श को तालु।
हेर्नुहोस्। आफ्नो मुख खोल्नुहोस्, आफ्नो जिब्रो बाहिर छडी। अन्य ओठ एक कुनाबाट सार्न। यस्तो व्यायाम, कम्तिमा7पटक गर्छन्।
स्वादिष्ट चकलेट। prichmoknite चाट्नु ओठ, मुख मा जिब्रो लुकाउनुहोस्।
घोडा। को तालु थिच्न जिब्रो, तिनीहरूलाई scholkayte र छक्क देख।
जफत। Circularly चाट्नु पहिलो माथिल्लो र त्यसपछि तल्लो ओठ। भाषा लुकाउने।
हामी हाम्रो दाँत माझ्छु। आफ्नो ओठ र दाँत भन्दा जिब्रो स्लाइड। यो व्यायाम 7-8 पटक गर्छन्।
यी मुख्य व्यवसायों छन्। तपाईं केहि तिनीहरूलाई विभिन्न थप्न सक्नुहुन्छ। बच्चा गरिरहेको रुचि थियो कि मुख्य कुरा। त्यसपछि तपाईं राम्रो परिणाम हासिल गर्नेछ।
Articulation बच्चाहरु5वर्ष को लागि अभ्यास
यो उमेर मा धेरै बच्चाहरु अक्षरहरू, लगभग सबै उच्चारण। "पी" अक्सर कठिन हो, "एसएच", "W", "घन्टा" सुनिन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई जोड बनाउन आवश्यक छ। बच्चाहरु5वर्ष पुरानो लागि Articulation अभ्यास राइम वा प्रस्ताव आमन्त्रित गरिन्छ।
त्यो बच्चा "डब्ल्यू", पत्र उच्चारण उसलाई भन एक सानो कहानी गर्न सिकेका छ:
मरियम sews तकिया, माउस र बिरालो।
मखमली टोकरी कढाई र विन्डो मा कटौती।
म तकिया यो सबै सी।
सुदूर त्यो आफ्नो हात समाते थिएन कि एक बिरालो sewed।
अब तयार, हाम्रो बैग, र बिरालो माउस पकड छैन।
आफ्नो बच्चा प्रश्न:
जो तकिया sewed? कि यो मा कढाई छ? Masha एक बिरालो र कुन उद्देश्यका साथ sewed? कथा Retell।
"पी" पत्र को धेरै संग आफ्नो बच्चा एक कहानी भन्नुहोस्। उदाहरणका लागि: रोम नदी गए र केही केकडे फसाउन निर्णय गरे। उहाँले पानी मा dived। म एक गुफा मा एक क्यान्सर देखे, तर हात ले डर थियो। त्यसपछि उहाँले किनारमा गर्न पायो, पन्जा मा राखे। उहाँले dived र क्यान्सर पायो। म बोक्न र खाने को लागि यो पकाउन घर जान चाहन्थे। तर रोम क्यान्सर को लागि खेद थियो, र तिनले नदी जान दिनुहोस्। उहाँलाई बाँच्न दिनुहोस्।
बच्चा सम्बन्धित मुद्दाहरू सेट पाठ को आधार मा। उहाँले थप विकसित बोली र ध्वनि उच्चारण वार्ता गर्दा। यसरी बाहिर काम भइरहेको र उहाँलाई बाँकी अक्षरहरू कठिन छ।
कसरी पुरानो समूहमा भाषण चिकित्सा कक्षाहरू पूरा गर्न
विशेषज्ञहरु उच्चारण यस उमेर मा एक बच्चा सही र सही हुनुपर्छ भन्छन्। यसलाई पहिले नै स्कूल लागि तयारी शुरू भएको छ। तसर्थ, articulation थप ध्यान चयन बच्चाहरु को पुरानो समूहको लागि अभ्यास।
समस्या यो छ कि समय बाहिर जान्छ रूपमा माथि6वर्ष कुनै एक बच्चा संग संलग्न गर्न, उनले प्रयोग भने, त्यसैले भन्न छ। त्यसैले कठिन सिक्ने को छ वर्ष preschooler। तथापि, हरेस छैन। तपाईं लगातार आफ्नो बच्चा सच्याउन आवश्यक छ।
कुरा गर्न, सकेसम्म धेरै प्रयास उहाँले तिनीहरूलाई कविता भन्नु सक्ने preschooler Tales पढ्नुहोस्। सम्झना! बोलीको विकास - आफ्नो बच्चा भविष्य। यसलाई प्रदर्शन को सही उच्चारण मा निर्भर गर्दछ। आखिर, बच्चा उहाँले राम्ररी बोल्न सक्छ भने, पढ्न र लेख्न सक्ने छैनन्।
कथाहरू साथै, मोडेलिंग, टालो सजावट र fingertip रेखाचित्र मा लगे। यी सबै गतिविधिहरु सकारात्मक बोलीको विकास असर गर्छ।
बच्चाहरु को लागि articulating व्यायाम: समीक्षा
धेरै आमाहरू खुसी articulation अभ्यास हो। तिनीहरूले बरु चाँडै बोल्न सुरु खेल र छोराछोरीलाई को कथा को मद्दत संग दाबी गर्छन्। पनि सही तिनीहरूलाई अक्षरका गाह्रो उच्चारण गर्न सिक्न।
दुई सत्र बच्चा पछि उहाँले के र व्यायाम बारम्बार भन्दा। वयस्क निजी पाठ खोल्न र थप जान्नको लागि बच्चा मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तसर्थ, आमाबाबुले अक्सर सकेसम्म बच्चाहरु संग articulation अभ्यास संलग्न सल्लाह छन्।
यसलाई गरिएका रूपमा, धेरै उपयोगी articulation बच्चाहरु को लागि अभ्यास। प्रत्येक उमेर लागि कार्ड फाइल यसको आफ्नै छ। कक्षाहरू चरणमा बाहिर गर्नुपर्छ। पहिलो, देखाउने र व्याख्या गर्न बच्चा तयार। त्यसपछि तपाईंले आवाज सही राख्नु आवश्यक छ। ठूलो र राम्रो मोटर कौशल, ध्यान र स्मृति बारे मा भूल छैन।
अर्को चरणमा जानुहोस् अघिल्लो एक राम्रो सुरक्षित हुँदा मात्र। Articulation अभ्यास बच्चाहरु को लागि व्यायाम धेरै उपयोगी छ। सही र स्पष्ट भाषा विकासको लागि जन्म देखि बच्चाहरु संलग्न। त्यसपछि आफ्नो बच्चा प्रारम्भिक मात्र बोल्न सुरु, तर पनि बुझ्ने।
बाल धातु को लागि रेलवे
छोराछोरीको Giardia लक्षण
बच्चाहरु - यो हाम्रो सबै छ!
Inflatable सर्कल Swimtrainer: वर्णन, प्रकार, निर्माता र मालिक समीक्षा
आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक पिरामिड के हुन्? छनौट पहिलो खिलौने र सुझावहरू को अवलोकन
बाल सदन मा थिएटर को प्रकार र नाटकीय खेल विशेषताहरू
अनपेक्षित अतिथि को सीमा मा? तयार द्रुत सलाद प्राप्त!
सुविधा र लाभ वाहन Zil 4331
गर्भावस्था को समयमा नोक्सानी naftizin गर्न सक्छन्?
योनी बाट रगत मृत्यु सक्छ
को काम अवस्था के हो। हानिकारक काम अवस्था बारे
विशेषज्ञ राय र महत्त्वपूर्ण तथ्य: यो ग्रीवा क्षरण को गर्भ धारण गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर
डोमेन र होस्टिंग के हुन्
आयकर को घोषणा
व्यवस्थापन र को खण्ड "नौकर: Arkham शरण"